Kitapo fanontam-pirinty BOPP (B)
Masinina efa niasa
Ahoana ny fomba hisafidianantsika milina mpanamboatra kitapo PP?
Manana mpanjifa marobe isika miaraka amina fanontaniana maro rehefa mividy milina fanaovana kitapo PP vita amina. Ka inona no azontsika atao mba hampihenana ny fahaverezan'ny vola? Mividy kitapo amin'ny mpamatsy hafa ary mividy azy ireo sa mividy milina hamokarana kitapo? PP mamokatra harona famokarana dia renivohitra ...
Masinina inona no ilaina amin'ny tsipika famokarana kitapo PP iray manontolo?
Ho an'ny tsipika famokarana kitapo PP iray manontolo, mazàna dia mila milina 14, Mixer Mixer, Auto Feeder, Flat Yarn Extruder, Cam Winding Machine, Circular Loom Machine, Computer Control 6 Colour BOPP Pirinty natao pirinty, Masinina fanosotra roa maty mandroso, Gusseti mandeha ho azy ...
Ahoana ny fomba hisafidianana ny milina fanontam-pirintinao ho an'ny kitapo misy tenona PP?
Misy milina fanontana isan-karazany eny an-tsena, samy hafa be ny endrik'izy ireo ka mahatonga antsika hanina. Ka ahoana ny fisafidianantsika milina fanontana mety amin'ny orinasa misy antsika? Ity misy torohevitra vitsivitsy. Voalohany, mila manasokajy ny milina fanontana amin'ny tsena isika, mety ho milina fanontana gravure ...
Andalana famokarana harato / leno roa samy hafa
Misy kitapo harato / leno roa samy hafa eny an-tsena, samy hafa ny fisehony, ny etsy ambany, pls. Kitapo harato / Leno / raschel amin'ny alàlan'ny fanapahana hafanana ...